Ahoana raha miasa ny marketing anao? | Martech Zone
Alatsinainy 1 Febroary 2010 Zoma, Aogositra 2, 2013 Matt Nettleton
Amin'ny maha-mpanazatra varotra ahy dia miara-miasa amin'ny orinasa amin'ny indostria maro karazana aho. Ary saika ny orinasa rehetra iarahako miasa dia mandany bebe kokoa amin'ity taona ity noho ny tamin'ny marketing amin'ny Internet, anisan'izany ny media sosialy.
Mampalahelo fa maro amin'ireo orinasa ireo no manomboka miasa ny marketing amin'ny Internet ary mahazo antso sy mailaka avy amin'ireo mpividy mafana fo nahita sy nanara-dia azy ireo tamin'ny Internet izy ireo. Saingy mahatsikaritra fironana mampiahiahy izy ireo, ny marketing dia afaka mamorona fitarihana fa ny ekipa mpivarotra dia manana olana bebe kokoa noho ny mihidy.
Tsy ireo olona namidinao taminao 3 taona lasa ny vinan'ny Internet. Ireo olona tamin'ny 3 taona lasa ireo dia tena tsy nahalala zavatra betsaka momba anao fa tsy tena fantany izay nivarotanao na ny fomba fivarotanao azy. Tsy fantatr'izy ireo izay nataonao tsara na hevitra momba izay mety nataonao ratsy. Raha ny marina, 3 taona lasa izay rehefa nanontany ianao, ny fangatahana mahazatra indrindra avy amin'ny fanantenana dia ny 'lazao amiko ny zavatra ataonao sy ny fomba fanaovanao izany.? Ny fanantenana anio dia tsy te hahalala? Inona no ataonao ary ahoana no anaovanao azy.? Ary izany dia miteraka fahatapahana mafy eo amin'ny mpividy sy ny mpivarotra dieny izao.
Google ny prospect androany, nijery ny pejy facebook anao, nanaraka anao tao amin'ny twitter ary namaky hevitra momba anao tamina yelp. Fantatr'izy ireo izay ataonao, ny fomba fanaovanao izany ary ny antsipirian'ny sordid rehetra momba ny lesoka nataonao nandritra ny taona lasa. Manana antony hifandraisana aminao izy ireo ary tsy tokony hamakiana bokikely amin'izy ireo.
Ny fanantenana vaovao dia tsy te hianatra momba anao-avy aminao. Fantatr'izy ireo ny ankamaroan'izany alohan'ny hahatratraranao azy ireo. Raha mamorona fitarihana ny varotrao ary tsy afaka manidy azy ireo ny ekipan'ny varotrao, ny olana dia tsy ny kalitaon'ny fitarihanao. Ny olana dia mazàna ny kalitaon'ny fizotry ny varotra avelanao hampiasa ny ekipan'ny varotrao.
Raha natao hilazana amin'ny olona momba anao ny fizotry ny varotrao dia misy lesoka izany ary mila miova ianao.
Hamarino tsara fa misy ny fizotran'ny rafitra hitadiavana ny orinasanao Nahoana ny prospect dia nifandray taminao. Rehefa azonao ny filan'ny vinavina, dia mametraka ny orinasanao amin'ny toerana hahomby amin'ny mpividy ianao.
Tags: marketing amin'ny BluetoothWordPress
Matt Nettleton dia misy fiatraikany lehibe, mpitarika ekipa mpivarotra mavitrika ary mpanazatra miaraka am-pitiavana ny valiny ary rakitsoratra efa voaporofo. Manana traikefa mihoatra ny 25 taona aho manomboka ny fanovana ny fanatratrarana tanjona ary ny fanatsarana ny loharanom-bola ho an'ny fanatsarana ny vola miditra, ny fitantanana ny fandaniana ary ny fitomboan'ny tombom-barotra.